Wasaaradda Qorshaynta oo ku Hawlan Diyaarinta Qorshaha 2aad ee Horumarinta Qaranka | Berberanews.com
Home WARARKA Wasaaradda Qorshaynta oo ku Hawlan Diyaarinta Qorshaha 2aad ee Horumarinta Qaranka
Wasaaradda Qorshaynta oo ku Hawlan Diyaarinta Qorshaha 2aad ee Horumarinta Qaranka
Hargeysa-(Berberanews)-Wasaaradda Qorshaynta iyo Horumarinta Qaranka ee Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa sheegtay inay ku hawlan tahay diyaarinta qorshaha labaad ee horumarinta qaranka loogu talogalay in lagu shaqeeyo ilaa sannadka 2021-ka, haddii Ilaahay yidhaah.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Qorshaynta Md. Xasan Cumar Hoorri, ayaa qoraal uu soo saaray kaga hadlay waxyaabaha ay doonayaan inay ku saleeyaan diyaarinta wejiga labaad ee qorshayaasha horumarinta qaranka (QHQ2), waxaannu ka codsaday qaybaha kala duwan ee bulshada, gacansatada, Qarammada Midoobay, qaadhaan-bixiyeyaasha iyo hay’adaha caalamiga ah inay kala shaqeeyaan hirgelinta qorshahaas horumarineed.
“Sida laga warqabo waxaa aan dhowaan ka faraxalanaynaa Qorshahii kowaad ee Horumarinta Qaranka (QHQ1) isagoo ku ekaa sannadahii 2012 ilaa 2016. Sidoo kale, waxa gabaabsi ah qorshayaashii Horumarinta Wadaagayaasha (sectors) iyo Qorshahii Horumarinta Gobollada, iyadoo labaduba soo gebogeboobayaan dabayaaqada sannadkan 2016. Sidaa awgeed, iyadoo la tixgelinayo siyaasadda xukuumadda Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), isla markaana laga duulayo mudnaanta ay kala leedahay baahida dalkeenna iyo dadkeenna; Wasaaradda Qorshaynta Qaranka iyo Horumarintu waxaa ay xilligan si baahsan ugu hawlan tahay diyaarinta Qorshahii 2aad ee Horumarinta Qaranka (QHQ2).
Waxa aan ka soo gudubnay dib-u-eegista iyo qiimaynta Qorshahii 1aad ee Horumarinta Qarabka (QHQ1) si loo ogaado wixii qorshaysnaa, wixii qabsoomay iyo wixii qabyo ah.
Qorshaha 2aad ee Horumarinta Qaranka (QHQ2), haddii Eebbe oggolaado, waxa uu socon doonaa 2016 ilaa 2021, iyadoo dulucdiisu tahay sidii loo yarayn lahaa saboolnimada, loona gaadhi lahaa horumar waara.
Qorshaha cusub (QHQ2) waxa uu kaga duwan yahay qorshahii hore:
Isagoo mudnaanta siinaya Qorshaha Horumarinta Degmada (QHD), isla markaana midayn doona qorshayaasha heer degmo iyo heer qaran.
Wasaaradda Qorshaha Qaranka iyo Wasaaradda Arrimaha Gudaha waxa ay si mug leh u la shaqayn doonaan dawladaha hoose ee degmooyinka, iyagoo gacan weyn ka geysan doona meel-marinta nidaamka hoos-u-daadejinta maamulka, kuwaasoo loo adeegsan doono xeer-nidaamayaasha maamul ee hore lagu sameeyay heer degmo.
QHQ2 waxa uu tixgelin siin doonaa gobollada dalka si ay dhankooda uga soo alkumo, ayna u ahaadaan aasaaska (QHQ2).
Sidaa darteed, Wasaaradda Qorshayntu toddobaadyada soo socda waxa ay ka soo fulin doontaa dhammaan gobollada dalka shirar-hawleed looga arrinsanayo diyaarinta Qorshaha 2aad ee Horumarinta Qaranka (QHQ2.)
Haddaba, Qorshaha 2aad ee Horumarinta Qaranka (QHQ2) waxa uu horseed u noqdon doonaa Qorshayaasha Fog ee Qaranka, kuwaasoo lagu saleeyo Tiirarka Horumarineed ee Caalamiga ah (MDGs), laguna hilaadiyo halka uu ku sugnaan doona qaranku sannadka 2030, haddii Eebbe idmo. Qorshaha waxa tiir u ah lafa-guridda iyo horumarinta dhinacyada Dhaqaale (Economy), Kaabayaasha (Infra-structure), Maamul (Governance), Bulsho (Social) iyo Degaan (Environmental).
QHQ2 waxa uu si toos u abbaarayaa qaab-dhismeedka hay’adaha qaranka iyo goldaloolooyinka ka jira si loo gaadho isbeddel dhinacyada maamul, dhaqaale iyo bulsho taasoo keeni karta qaranku in uu tiigsado ama gaadho horumarka aan haybinayno.
QHQ2 waxa uu u gogol xaadhayaa in la diyaariyo jewi ay ka curan karto shaqo-abuuris, si loo meeleeyo, gaar ahaan dhallinyarada, iyo guud ahaan bulshada xooggoodu u ku baaqsaday hawl la’aan darteed, in la horumariyo xirfadaha shaqo, in lala jaanqaado tiknoolajiyadda casriga ah, iyo in la helo maamul-wanaag suurtogeliya tartan hufan iyo kor u qaadista dakhliga qofka iyo qarankaba.
Waxa qorshaysan xukuumaddu in ay si mug leh u maalgeliso kaabayaasha dhaqaale, kor u qaado tayada hay’adaha qaran, in ay dhisto ama dhammaystirto shuruucda dalka iyo in ay abuurto siyaasado keenta isbeddello horumarineed. Sidoo kale, xukuumaddu, horumarinta waxaa ay la kaashan doontaa ganacsatada oo iyagu ah giraanta wareejinaysa horumarinta. Si la mid ah, horumarka waxaa kaalin ka qaadan doona bulshada “Qurbo-joogga,” bulshada rayidka, muwaaddiniinta, maalgeliyayaasha shisheeye iyo bulshada caalamka.
Xukuumadda Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) waxa ay hore u soo bandhigtay, haddana ay sii horumarin doontaa siyaasado ka tarjumaya baahida shacabka (oriented policies) si loo dhiirrigeliyo maalgashiga sokeeye iyo shisheeyeba, wax-soo-saarka dhinacyada kala duwan sida xoolaha, beeraha, warshadaha yaryar iyo macdanta si looga daboolo baahida dalka, isla markaana loo gaadhsiiyo heer loo dhoofiyo dibedda. Xukuumaddu waxa ay fulin doontaa horumarinta siyaasadaha lagu dhiirrigelinayo ganacsiga xorta ah iyo fudaydinta jewi ganacsi oo lagu hodmo. Waxa laga maarmaan ah in hore loo mariyo adeegyo tayo leh oo xafiisyada ummaddu ugu khidmeeyaan bulshada.
Haddaba, annagoo si wadajir ah u wada diyaarin doonna aayaheenna iyo qorshaha qarankeenna, waxaan ugu baaqaynaa shacabka reer Somaliland in ay nala tabantaabiyaan, talana ku soo darsadaan Qorshaha 2aad ee Horumarinta Qaranka (QHQ2). Sidoo kale, ganacsatada gaarka ah, bulshada rayidka ah iyo qurbo-joogga waxaan ugu yaboohaynaa in ay gacan ka geysataan QHQ2 iyagoo nala wadaagaya xogta, qorshayaashooda gaarka ah iyo waxii talo-soo-jeedin ah.
Wasaaradaha iyo hay’adaha qaranka waxaan ka sugaynaa in ay soo gudbiyaan qorshayaashooda shanta sanno ee soo socda iyagoo ku qotomin doona siyaasadaha, barnaamijyada iyo mashaariicda tusmada u ah QHQ2.
Ugu dambeyn, bulshada caalamka, hay’adaha Qarammada Midoobay, ururrada samafaleed ee caalamka, dalalka deeqda bixiya iyo saaxiibbada Somaliland waxa aan ka codsanaynaa in ay naga kaalmeeyaan diyaarinta, meelmarinta iyo xaqiijinta Qorshaha cusub, waxqabadkoodana ku saleeyaan QHQ2 iyo Aragtida Qaran ee 2030ka,” ayuu yidhi Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Qorshaynta Somaliland.
Previous articleGolaha Deegaanka Hargeysa; Xaabo Ay Bulshadu Qiiq Un Ka Dhaxashay!
Next articleCali-guray oo ku baaqay in Xafiiska Katiinad lagaga xidho Faysal Cali-waraabe oo Xabsiga la dhigo